सिमाक्षेत्रमा तस्करी विरुद्ध समाचार लेखेको भन्दै गाउँपालिका प्रमुख शाह पत्रकारहरु संग आक्रोशित - PUBLICAAWAJ
सिमाक्षेत्रमा तस्करी विरुद्ध समाचार लेखेको भन्दै गाउँपालिका प्रमुख शाह पत्रकारहरु संग आक्रोशित
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ०८, २०७५१५:२२ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
पब्लिक आवाज /संवाददाता
सिरहा । मिशन बोर्डर अन्तरगत सिरहाका केही पत्रकारहरुले सिमाक्षेत्रमा भइरहेको अवैद्य मालसमान तस्करी विरुद्ध समाचार लेखेपछि लक्ष्मीपुर गाउँपालिका प्रमुख रामबल्भ शाह आक्रोशित भएका छन् ।
लक्ष्मीपुर गाउँपालिका प्रमुख रामबल्भ शाह
प्रमुख साहका सम्बन्धित मान्छेलगायतले गर्दै आएको बलुवा, गिट्टी ,राजनिवास, रजनीगन्धा, मरिच तथा विभिन्न किराना मालसमान अवैद्य रुपमा भारत निकासी पैठारी गरिरहेको समाचार मिडियामा आएपछि सिमाक्षेत्रमा प्रहरीले कडा निगरानी बढाएको छ । सोही समाचार लिएर हिजो बेलुका लक्ष्मीपतारी गाउँपालिकाको कार्यालयमा एक पत्रकारलाई प्रमुख साहले आक्रोशित हुँदै भने ‘तिमीहरुको काम राम्रो होइन् ।’ ‘ समाचार लेखेर बोर्डरमा कडाई गर्नु तिमीहरुले के गर्न खोजिएको हो ? यो ठिक होइन् । पत्रकार र प्रमुखबीच एक छिन तनाव नै भएको थियो ।
सिमाक्षेत्रको समाचार लगातार आएपछि यत्तिबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले कचनारी , झाझपटी , जानकीनगर रेखदेख गर्न प्रहरी प्रकाश खडकालाई जिम्मा दिएको छ ।
त्यसक्षेत्रमा प्रहरी निगरानी कडाई गरेपछि दूई दिनदेखि तस्करहरुले पत्रकारहरुलाई धम्की दिन थालेको छ । पत्रकार प्रदीप सिँहलाई मंगलवार विहान साढे ९ बजेतीर देवनगरका आन्नद यादवले ज्यान मार्ने धम्की दिएको छ । पत्रकारलाई यसरी ज्यान मार्ने धम्की दिने यादवलाई कारवाही गर्न नेपाल पत्रकार महासँघ सिरहाले जोडदार माग गरेको छ ।
यसवारे ईलाका प्रहरी कार्यालय लहानका डिएसपी राजेश थापाले यस्ता गुण्डागर्दी गर्ने जोसुकैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँने बताउँनुभयो । सिमाक्षेत्रमा मरिच, मटर, किरानाका मालसमान, गिट्टी बालुवा, खैनीजन्य पदार्थ, कपडा, तेल, रक्सीलगायतका मालसमान अवैद्य रुपमा निकासी पैठारी हुँदै आएको छ ।
यता, समाचार आएपछि सिमाक्षेत्रमा खटिएका थप प्रहरीले भन्सार छलीका समान बरामद गरिएको छ । ईलाका प्रहरी विष्णुपुरका टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा अबैध रुपमा भारतबाट भन्सार छलि गरी नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको १ लाख बराबरको किरानाको मालसमान बरामद गरिएको छ ।
बरामद गरिएको मालसमान भन्सार कार्यालय सिरहा माडरमा बुझाउँने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । सिरहाका केही पत्रकारले यत्तिबेला मिशन बोर्डर नाम दिएर तीन दिनदेखि नियमित समाचार लेख्दै आएको छ ।
निर्मला पन्तकी आमाले बुझिन् राहत रकम, दुई छोरीको भविष्य निर्माणमा खर्च गर्ने !
पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले लियो गुठी विधेयक फिर्ता !